आज पनि घट्यो सुनको मूल्य , तोलाको कति ? हेर्नुहोस्... - Nepali news..
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य , तोलाको कति ? हेर्नुहोस्…
काठमाडौँ : लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य आज नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला १५ सयले घटेको छ ।
बुधवार प्रतितोला ७६ हजार ५ सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्य १५ सयले घटेर आज प्रतितोला छापावाला सुन प्रतितोला ७५ हजारमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महाँसघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ७४ हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ । भने, चाँदी बुधवारको तुलनामा ३० रुपैयाले घटेर प्रतितोला ६ सय ८० रुपैयामा कारोबार भइरहेको महासघंले जनाएको छ ।
Prevआज बढ्यो डलरको भाउसँगै साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ
Nextसरकारद्वारा विद्युत, र यातायातमा लाग्ने ज’रीवाना वापतको शुल्क ’मिनाह